नेपालमा भर्खर 3G बाट अपग्रेड भएर 4G इन्टरनेट चल्दैछ, तर यो देश पहिलो देश हुने छ जसले 6G तयारी सुरु गर्यो, कस्तो होला सिक्सजी? – News Mala
नेपालमा भर्खर 3G बाट अपग्रेड भएर 4G इन्टरनेट चल्दैछ, तर यो देश पहिलो देश हुने छ जसले 6G तयारी सुरु गर्यो, कस्तो होला सिक्सजी?
January 8, 2019 Debraj Kandel रोचक 0
बेइजिङ। चीनले इन्टरनेट डाटा ट्रान्सफर प्रविधि फाइभजीबाट पनि अघि बढ्दै सिक्सजीको तयारी सुरु गरेको छ । नेपालमा भने फोरजी प्रविधि भित्रिएकै धेरै समय भएको छैन ।
यहाँ फाइभजी पनि आएको छैन तर चीनमा भने सिक्सजीसमेत आउने भएको हो । चीनको सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग काम गरिरहेको फाइभजी वर्किङ ग्रुपका अनुसार २०२० सम्म सिक्सजीको परीक्षण सुरु हुनेछ । २०१९ मा चीनको पूरा ध्यान देशभर फाइभजी प्रविधिको विस्तारमा केन्द्रित रहनेछ ।
यसको लागि देशभर साढे ३ लाख नयाँ टावर स्थापना गरिएको छ । अहिले नेपालमा चलिरहेको फोरजी प्रविधिलाई फाइभजी बनाउने हो भने अहिलेको इन्टरेटको गतिलाई २५ देखि ३० गुणा बढाउन सकिनेछ । सिक्सजी प्रविधि फाइभजी भन्दा पनि ३० गुणा छिटो डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्षम हुनेछ ।
सिक्सजीको लागि काम सुरु भइसकेको छ र यसको परीक्षण सफल भएमा चीन सिक्सजी प्रविधि भएको संसारकै एकमात्र देश बन्नेछ । सिक्जी प्रविधिमा मेगाबाइट प्रतिसेकेण्ड वा गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड मात्र नभइ टेराबाइट प्रतिसेकेण्डको गतिमा डाटा ट्रान्सफर हुनेछ ।
सलाम छ रूपा तिमीलाई, यिनै हुन जसले माईती छोडिन् तर २ हात र एक खुट्टा काटिएका आफ्नो श्रीमान छोडिनन् (भिडियो सहित)
यो पनि बद्री पंगेनी र स्वस्तिका तिमील्सीनाको पन्चेबाजा गीत बजारमा
र यो पढ्नुहोस गायिका बिष्णु माझी प्रहरीकोमा जानुको रहस्य यस्तो रहेछ, माझिको बारेमा प्रहरीको आयो यस्तो चासो